Global Voices teny Malagasy » Egipta: Nofoanan’ny Fitsaràna ny sazin’ilay mpitoraka blaogy Wael Abbas · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Febroary 2010 21:21 GMT 1	 · Mpanoratra Noha Atef Nandika Candy
Sokajy: Ejipta, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Noafahan'ny fitsaràna Egiptiana ilay mpitoraka blaogy Wael Abbas  rehefa nahazo sazy enim-bolana  avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Tamin'ny volana Novambra no navoaka ny didim-pitsarana taorian'ny tsy fifanarahana nisy teo amin'i Abbas sy ny mpifanolo-bodirindrina aminy sy i Ahmed Maher Aglan ary ny rahalahiny manamboninahitra polisy Ashraf Aglan tamin'ny volana Aprily 2009, noho ny resaka fidirana amin'ny aterineto. Notafihan'ireto mpirahalahy ireto ny tranon'i Abbas, nompain'izy ireo sy nodarohiny dia avy eo nendrikendrehina izy ho nanimba “câble” aterineto.
Nanome fiarovana araka ny voasoritry ny lalàna  ho an'ilay mpitoraka blaogy Egiptiana ny Tambajotran'ny Arabo miaro ny zon'olombelona  (ANHRI). Iray andro mialohan'ny fitsaràna dia nanoritra iny fanenjehana iny ho ‘tranga noforonina’ ny ANHRI ary miantso firaisan-kina amin'i Wael:
Tamin'ny didim-pitsarana navoaka tamin'ny 18 Febroary 2010, ny Reporters without Borders  no nandray tamin-kafaliana azy ity ho ‘fandresena':
Mpitoraka blaogy sy mafana fo maro no nanatrika ny fitsaràna natao tany Hadayq El Kobba any Caire, izay nanao akanjo misy ny sarin'i Abbas, mba anehoana ny firaisan-kina aminy. Notaterina mpitoraka blaogy sasany tamin'ny Twitter  koa ny fizotry ny fitsaràna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/02/26/5131/
 nahazo sazy enim-bolana: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2010/01/23/egypt-blogger-wael-abbas-sentenced-to-jail-another-still-in-prison-despite-judicial-release-order/
 araka ny voasoritry ny lalàna: http://www.anhri.net/en/reports/2010/pr0217.shtml
 Tambajotran'ny Arabo miaro ny zon'olombelona: http://www.anhri.net/en/
 Tamin'ny didim-pitsarana navoaka tamin'ny 18 Febroary 2010, ny Reporters without Borders: http://www.rsf.org/Authorities-urged-to-stop,36475.html